Gịnị Mere My iPhone ngwa ọdịnala Nọgide Na-emebi? Idozi (Maka iPads kwa)! - Iphone
batrị iphone na -ekpo ọkụ mgbe ị na -chaja
iphone m agaghị agbanye ụzọ niile
Igwe okwu iphone anaghị arụ ọrụ na siri
iphone 4 agaghị ejikọ ya na iTunes
Gịnị Mere My iPhone ngwa ọdịnala Nọgide Na-emebi? Nke a bụ ndozi.
Go na-aga imeghe ọkacha mmasị gị iPhone ngwa, ma sekọnd mgbe ị malite ya, ngwa mkpọka. Go na-aga imeghe ngwa ọzọ ọ dara. Mgbe ị nwesịrị ngwa ole na ole, ị jiri nwayọ ghọta na otu ma ọ bụ karịa nke ngwa gị na-akụ, n'agbanyeghị na ha na-arụbu ọrụ. 'Gịnị mere m iPhone ngwa ọdịnala na-n'iyi?' , ị na-eche n’obi gị.
Luckily e nwere ihe ole na ole dị mfe ngwọta nsogbu a - ọ dị nnọọ chọrọ a bit nke nchọpụta nsogbu iji chọta ezi onye. N'isiokwu a, m ga-akọwa -esi idozi gị iPhone mgbe ngwa ọdịnala na-n'iyi . Nzọụkwụ ndị a ga - enyere gị aka idozi ngwa ndị na - emebi na iPad gị!
Otu esi egbochi ngwa gi site na nbibi
E nwere ọtụtụ ihe mere gị iPhone ngwa nwere ike na-n'iyi. N'ihi nke a, ọ dịghị otu-size-dabara-niile ngwọta maka gwara n'iyi iPhone ngwa. Otú ọ dị, site na ịchọta nsogbu ụfọdụ, ị ga-enwe ike ịlaghachi na ngwa na egwuregwu kachasị amasị gị oge ọ bụla. Ka anyị jee ije na usoro ahụ.
Reboot gị iPhone
Nzọụkwụ mbụ ị ga-ewere mgbe ngwa iPhone gị na-akụda bụ ịmalitegharị iPhone gị. Ọ dị mfe ime: naanị jide bọtịnụ ike iPhone gị ruo mgbe Slide Iji Gbanyụọ ozugbo pụtara. Ọ bụrụ na ị nwere iPhone X ma ọ bụ karịa, pịa ma jide bọtịnụ n'akụkụ yana bọtịnụ olu ruo mgbe Slide Iji Gbanyụọ na-egosi.
Mia akara ngosi ike uhie site n'aka ekpe gaa n'aka nri iji gbanyụọ iPhone gị. Chere 20 sekọnd ma ọ bụ karịa, ruo mgbe iPhone gị mechiri ụzọ niile, wee gbanwee iPhone gị site na ijide bọtịnụ ike (iPhone 8 na okenye) ma ọ bụ bọtịnụ n'akụkụ (iPhone X na nke ọhụrụ) ruo mgbe akara Apple pụtara ihuenyo. Gbalịa mepee ngwa ozugbo iPhone gị amalitegharịrị.
Melite ngwa gị
Oge ochie iPhone apps nwekwara ike ime ka ngwaọrụ gị daa. Imelite gị iPhone ngwa ọhụrụ version dị mfe ma na-ewe nkeji ole na ole. Soro n'okpuru:
Mepee Storelọ Ahịa ngwa na iPhone gị.
Kpatụ akara ngosi Akaụntụ gị n'akụkụ aka nri elu ihuenyo ahụ.
Pịgharịa gaa chọta ndepụta nke ngwa gị na mmelite dị.
Kpatụ Mmelite na-esote ngwa ma ọ bụ ngwa ịchọrọ imelite.
I nwekwara ike pịa Melite ihe niile imelite niile gị ngwa ọdịnala ozugbo.
Weghachi nsogbu gi ma obu ngwa
Ọ bụrụ na naanị otu onye ma ọ bụ abụọ nke gị iPhone ngwa ọdịnala na-n'iyi, gị nzọụkwụ ọzọ bụ na-reinstall nsogbu iPhone ngwa. Na nkenke, nke a chọrọ ka ihichapụ ma budata ngwa ndị na-akụda site na Storelọ Ahịa App.
Ihichapụ ihe ngwa, chọta ya akara ngosi na Ihuenyo mbu ma ọ bụ App Library. Pịa ma jide akara ngosi ngwa ahụ ruo mgbe menu gosiri. Kpatụ Wepu App -> Hichapụ App -> Hichapụ iwepụ ngwa gị iPhone.
Iji rụnyeghachi, mepee Storelọ Ahịa ngwa ma chọọ ngwa ihichapụrụ. Ozugbo ịchọtara ya, pịa ya Cloudgwé ojii akara ngosi aka nri nke aha ya. Ngwa a ga - etinyezi na iPhone gị wee gosi na Ihuenyo mbu.
Ọzọ kwere omume ihe mere gị iPhone ngwa ọdịnala na-n'iyi bụ na gị iPhone software nwere ike ịbụ nke oge. Imelite gị iPhone, na-eso ndị a atọ:
Kpatụ Ibudata na Wụnye ma ọ bụ Wụnye Ugbu a ma ọ bụrụ na mmelite iOS dị.
Ọ bụrụ na enweghi mmelite ọ bụla, ị ga-ahụ ozi na-ekwu, 'Sọftụwia gị dị ọhụrụ.'
Ọ bụrụ na ngwa iPhone gị dị ka n'iyi, nzọụkwụ ọzọ bụ ịrụ DFU weghachi. Na nkenke, a DFU weghachite bụ ụdị pụrụ iche nke weghachi iPhone nke na-ehichapụ ma ngwanrọ ngwanrọ na ngwaike nke iPhone gị, na-enye gị ngwaọrụ 'dị ọcha' kpamkpam.
Biko mara na DFU Iweghachi gị iPhone, dị ka a ọkọlọtọ weghachi, ga-akwụsị ihe niile ọdịnaya na ntọala site na ngwaọrụ gị. N'iburu nke a n'uche, jide n'aka na ndabere data gị na kọmputa gị ma ọ bụ iCloud tupu DFU Iweghachi. Ịrụ DFU weghachi, soro Payette Forward DFU weghachite ndu .
Obi ụtọ na mbupu!
’Ve dozie nsogbu ahụ nke ọma ma mara ihe ị ga-eme mgbe ngwa iPhone gị na-akụda. Jide n'aka na ịkekọrịta isiokwu a na mgbasa ozi mmekọrịta iji kụziere ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị otu esi edozi nsogbu ahụ! Hapụ ikwu okwu n’okpuru iji mee ka anyị mata nke n’ime ihe ngwọta ndị a mezigharịrị ngwa gị iPhone.